जापानमा नर्सिङ्ग केयर होम सेक्टरमा काम | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > VISA > जापानमा नर्सिङ्ग केयर होम सेक्टरमा काम
जापानमा श्रमको अभावले ग्रस्त भएको एक उद्योग नर्सिङ् होम केयर सेक्टर हो। श्रमको अभाव भएता पनि जापनी समाज वृद्हरुको समाजमा परिणत हुनलागे संगै नर्सिङ्ग होम केयर सेक्टरको माग हर्क वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ। यसको अर्थ जापानी नागरिक र विदेशीहरू दुवैको लागि स्थिर आम्दानी आर्जन गर्न यो कामले धेरै ढोका खोलिदिएको छ। हामी टोकियोको एक नर्सि होममा गएका थियौं। त्यहाँ हामीले जापानमा भविष्यको रोजगार सम्भावनाहरू र सामान्यतया जापानमा नर्सिङ्ग केयर होम सेक्टरमा काम गर्नेबाट के आशा गर्ने भनेर कुरा गरेका थियौ।
नर्सिङ्ग केयर होम सेक्टरमा काम कसरि खोज्ने?
नर्सिङ्ग केयर होम सेक्टरमा काम गर्न के सजिलो छ ?
वृद्धलाई लिभ-इन सुविधामा हेरचाह गर्नु भनेको उनीहरूलाई दैनिक आवश्यक पर्ने सबै चीजहरूमा सहयोग गर्नु हो। नर्सिङ्ग केयर स्टाफ सदस्यले लुगा धुने, खाना पकाउने, सफा गर्ने, नुहाउने र शौचालय लैजाने साथै सुविधाहरूको जस्तो मनोरञ्जनका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, कहिले काँही खेल र बाहिरका पदयात्रा। यद्यपि, त्यहाँ प्रायः धेरै कर्मचारीहरू उपस्थित हुने भएकाले सबै काम हजुरले एक्लैले गर्नु पर्ने भन्ने हुन्न। “हामी प्रत्येक समय एक अर्कालाई सहयोग गर्दछौं,” हामीले कुरा गरेको नर्सिंग केयर होमका कर्मचारीले हामीलाई भनेका छन्।
यस काममा ठूलो सहयोग आधुनिक टेक्नोलोजीले विस्तार गरेको छ। त्यहाँ धेरै प्राविधिक प्रगतिहरू छन् जुन वृद्धहरूको लागि जीवन सजिलो बनाउँदछ र नर्सिङ्ग केयर स्टाफको लागि पनि काम सरल बनाउदछ। त्यहाँ विशेष ओछ्यान छन् र तिनीहरूको उचाइ एउटा सानो टच बटनले समायोजित गर्न सकिन्छ। त्यसकारण मानिसहरुलाई ओछ्यानबाट उठाउन र सुताउन निकै सहज हुँदछ। यो प्रबिधिले गर्दा काममा त्यति थकान नहुने हामीलाई त्यहाँका एक काम दारले बताए।
जापानको नर्सिंग केयर सुविधाहरूमा हाल लोकप्रिय उपकरण स्वत: औसधि डिस्पेंसिङ्ग मेसिन हो। प्रत्येक व्यक्तिले खाने औसधि फरक हुन्छ, त्यसैले प्रत्येक निवासीको औषधि पूर्व-क्रमबद्ध गरेर यस मेशिनमा राखिएको छ। त्यस पश्चात सविया काम मेसिनले गर्दछ। व्यवस्थित गरिएको निर्धारित समय डाक्टरले तोकेको आधारमा ठिक औषधि लिने समय भएको बेला एक अलार्म बज्दछ। यस तरीकाले, स्टाफले सबै बिभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरू सम्झनु पर्दैन र औषधिहरू मिसाउने गल्ति पनि हुदैन।
यसबाहेक, धेरै नर्सिङ्ग होमहरूको हरेक कोठा अलार्म हुन्छ जुन ट्रिगर भयो भने कोठाको ढोका माथि रातो बत्ती बल्छ र स्विचबोर्डमा फ्ल्याशको संकेत पथाउदछ। स्ट्याफले कुनै परिस्थितिमा द्रुत प्रतिक्रिया दिन सक्दछ।
कुनै पनि स्थितिमा जोकोही संग काम गर्दा बोल्ने कौशल आवश्यक हुन्छ। यसका अतिरिक्त, ती सीपहरू अन्य जागिरमा प्रयोग र सुधार गर्न सकिन्छ। नर्सिङ्ग होमका निवासीको आधारमा, कुनै व्यक्तिको क्षेत्रीय लबज पनि हुन सक्छ, वा तिनीहरूको बोली वृद्धावस्थाले प्रभाव पारेको हुने हुनाले, ध्यान दिएर सुन्नु महत्त्वपूर्ण छ। यसको मतलब विदेशी स्टाफको लागि कुराकानी गर्ने जापानी भाषा जान्नु आवश्यक पर्दछ। राम्रो नर्सिङ्ग होम सेवा सुविधामा बढी कर्मचारीहरू हुनेछन्, त्यसैले सम्भावित स्वदेशी वक्ता सहकर्मीहरूले विदेशी कर्मचारीलाई भाषाको साथ सहयोग गर्न सक्दछन्। भाषा सीपको साथ साथै यो काम बिरामी र ख्याल राख्ने व्यक्तिहरूलाई बढी उपयुक्त हुन्छ। दिनको अन्त्यमा, वृद्धसँग कुरा गर्नु पनि निकै रमाइलो अनुभब हुन्छ। उनिहरुको जिबनबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ।
किन गर्ने त यो नर्सिंग हेरचाह क्षेत्रमा काम ?
गम्भीर श्रम अभाव, र बढि नर्सिंग केयर होम र बढ्दो वृद्ध जनसंख्याले गर्दा होला यस क्षेत्रमा रोजगारिले निकै राम्रो कामको स्थिति प्रदान गर्दछ। नर्सिङ्ग होमहरु पेंशन योजना सहित सबै सुविधाहरु संग पूर्ण समय रोजगार प्रदान गर्दछ।यहाँ पार्ट टाईम जबगर्न रुचाउने हरुकोलागि पनि ब्यबस्था गरिएको छ। विशेष गरी उनीहरूको लागि जो पहिले यो काम एक चोटी गरि हेर्ने र मात्र फुल टाइम गर्ने वा नाइँ भनेर सोच्नेहरुको लागि पार्ट टाइम कामको ब्यबस्था गरिएको हो। पूर्ण-समय कामको लागि समय नहुने विद्यार्थीहरू, आंशिक काममा रुचि राख्ने गृहिणीहरू पनि यसमा सामेल छन्।c नर्सिइंग केयर होमहरूले प्रायः शुरुवातीहरूलाई स्वागत गर्दछन्, उनीहरूको लागि प्रगतिको अवसरको साथ क्यारियर को नया बाटो पनि खोल्दछन्। राम्रो नर्सिंग हेरचाह प्रदायकहरूको नयाँ कर्मचारी काम सुरु गर्नु अघि प्रशिक्षण कोर्समा उपस्थित हुन्छन् र काममा थप सिक्ने गर्दछन।
जापानका धेरै नर्सिंग केयर सुविधाहरूले जापानी नागरिक र विदेशी दुवैलाई स्वागत गर्दछन्, भिसा प्रक्रियामा उनीहरूको विदेशी कर्मचारीलाई सहयोग पुर्‍याउँछन् (यस क्षेत्रमा काम गर्न खाइगो भिसा जसको अर्थ हुन्छ “नर्सिंग केयर भिसा”, वा तोकुतेइ गिनो भिसा जसको अर्थ “विशेष कौशल भिसा” आवश्यक छ)।
हालसालनै आएर यसमा क्षेत्रमा तलब पनि निकै प्रतिस्पर्धी भइरहेको छ, त्यसैले उचित योग्यता भएका यस क्षेत्रका कर्मचारीहरूले सामान्यतया मासिक २,२०,००० येनको तलब वा त्यस भन्दा माथिबाट सुरु गर्दछ। पूर्ण-समय कामहरू प्रदान गरिएको यस केन्द्रमा मासिक तलब २,२०,००० येन वा सो भन्दा बढि छ (तलब स्थिर रूपमा बढ्नेछ) र धेरै सेन्टरहरु टोकियो क्षेत्रमा छन्। यस सेन्टर मार्फत नर्सिइंग केयर क्षेत्रमा पनि आंशिक रोजगारहरू उपलब्ध छन्। नर्सिइंग केयर होममा पार्टटाइम कामदारको भूमिका पूर्ण-समय हेरचाह गर्ने कर्मचारीलाई सहयोग पुर्‍याउनु हो।